Seesaw မိဘ & မိသားစု | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Seesaw မိဘ & မိသားစု
Seesaw မိဘ & မိသားစု APK ကို
Seesaw သင့်ကလေး၏ကျောင်းကနေ့ကစသင် Real-time ပုံရိပ်ကိုတကွက်ပေးသနားတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အစုစုသည်။ Seesaw သင်ကွင်းဆက်နေကူညီပေးသည်နှင့်သင်အိမ်တွင်သင့်ကလေး၏လေ့လာသင်ယူမှုကိုထောကျပံ့ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
200,000 စာသင်ခန်းကျော်, US မှာ 1 ကျောင်းများတွင်4နှင့် 100 နိုင်ငံများတွင်ကျော်များတွင်အသုံးပြု!
** ကျောင်းစာကြည့်တိုက်၏အမေရိကန် Association က 2016 ၏အကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက် Named, 2016 ထိပ်တန်းမှာ Common Sense Media ကပညာရေး Pick နှင့်9လအတွင်းအတွက် "ကျွန်တော်စာသင်ခန်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော" အဖြစ် Apple ကအတွက် featured ။ **
+ အသုံးပြုရန်သင်၏ကလေး၏ဆရာ FROM မှတစ်ဦးက SEESAW Signup ကုတ်တောငျး
သင့်ကလေးဟာသူတို့ရဲ့ဂျာနယ်အသစ် post ကိုဖြည့်စွက်သည့်အခါဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ပုံဆွဲကဲ့သို့အလိုအလျောက်အကြောင်းကြားရလိမ့်မယ်။ သင့်ကလေး၏ဂျာနယ်မှသစ်ကိုဖြည့်စွက်ကြည့်ရှုရန်နှင့်၎င်းတို့၏သင်ယူမှုကိုထောကျပံ့ဖို့အကြောင်းကြားစာကိုလိုက်နာပါ။
ရိုးရှင်းတဲ့သင်္ကေတပြ Up ကို
∙အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုသင့်ကလေး၏ဆရာထံမှလက်ခံရရှိသောလက်ကမ်းစာစောင်ပေါ်တွင် QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်
လွယ်ကူစွာကို Message ဆရာများ
ကို Message သင့်ကလေး၏ဆရာမနှင့်အတူပုဂ္ဂလိက∙
∙စပိန်, ပြင်သစ်, တရုတ်, ဂျပန်နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင်မှတ်စုများ, 50 + ဘာသာစကားများသို့မှတ်ချက်များနှင့်စာတန်းများကို, Translate!
∙သင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ကင်မရာလိပ်မှဘာမှ Save
အားလုံးအကြောင်းအရာပုဂ္ဂလိကနဲ့ Secure ဖြစ်ပါတယ်
∙ကျောင်းသားအကြောင်းအရာလုံခြုံဖြစ်ပြီး, 3rd ပါတီများနှင့်အတူ shared ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
∙ http://web.seesaw.me/privacy မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးအခြေခံမူထွက် Check
∙ရှိနိုင်အချိန်မရွေး web ပေါ်မှာအချိန်မရွေး: app.seesaw.me ။
အကူအညီလိုတယ်? help.seesaw.me မှာကျွန်တော်တို့၏အကူအညီစင်တာသို့သွားရောက်။
ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့သင်ယူမှုသရုပ်ပြအသုံးပြု Seesaw ရဲ့ဖန်တီးမှု tools တွေကို update လုပ်ပြီးပါပြီ။ ဒါက update ကိုသူတို့အားသစ်ကိုပို့စ်များကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်နိုင်စေသည်။
97.41 ကို MB
Seesaw: အဆိုပါ ...
snap Homework မှ app ကို ...